Madagasikara: Ravalomanana loza amin'atambo ! - jeannotramambazafy.overblog.com
Publié le 14 Octobre 2013 par Jeannot Ramambazafy
Madagasikara: Ravalomanana loza amin'atambo !
Alahady 13 Oktobra 2013. Mamy Rakotoarivelo (Filohan'ny CT), Lalao Ravalomanana, Jean-Louis sy Marcelle Robinson, Pierrot Botozaza (Praiministra lefitra misahana ny Ekonomia sy Indostria) tao amin'ny Coliseum Antsonjombe izay fotodrafitr'asa natsangan'ilay Boay kely "tsy mahay n'inona n'inona" (i Lalatiana Ravololomanana no niteny an'izany). Dia ho sahy nandingana io toerana io ve ireto olona ireto teo aloha teo ? Misy ny tombontsoany ka dia ireo ry zareo maka fy tsara ny fotodraditr'asan'i Andry Rajoelina
LAHATSORATRA PDF ETO
Mazava ry mpifidy Malagasy manerana ny Nosy miisa 7.823.305: Mifidy an’ny Dokotera Jean-Louis Robinson isika dia mifidy an’Ingahy Marc Ravalomanana. Izany hoe, mihevitra tokoa ity farany fa very tadidy ny maro an’isa ka voafafa daholo ny nahatonga azy nitsao-ponenana ao Afrika Atsimo ao.
Velom-panantenana indray Ingahy Marc Ravalomanana, filoha naongan'ny vahoaka toa an-dry Philibert Tsiranana (1972), Didier Ratsiraka (1991) sy Zafy Albert (1996). Ny taona 2002 moa dia amboletran'i Ravalomanana tamin'ny "Premier tour dia vita" no nahatonga an'i Deba nanao sesin-tany fanindroany tany Frantsa. Dia mitetika hamerina io "Premier tour dia vita" io ilay Valo, sy ny korontana haterak'izany. TSIA ! Tsy adala ny vahoaka malagasy akory
Mihevitra ho jesosy kely tokoa ka avy ao izy no manome ny toro-marika rehetra fa ilay Dokotera dia boloky fotsiny ihany. Aoriana izany dia hiverina indray. Izay ihany no tena tanjony ary efa nambaran’ity kandida tsy misy hazon-damosina ity mihitsy izany fiverenan’i Dada izany. Io no tena praogramany. I jeso ravalo moa amin’izany dia ny lasa tsy hiverina intsony no tanisainy ao anatina video efa nomanina mialoha. Tsy afaka ao amin’ilay Valo intsony ilay fandaingana toa mitaratra fahamarinana raha tsy mandalina ianao mihaino azy.
"Mody Ravalo" ! Io izany no tena masaka an-doha, ny sisa resaky ny mpandainga za-draharaha.
Adidy, hono, ny mandray anjara amin’ireo fifidianana ho avy mba hitsaharan’ny gaboraraka ankehitriny. Anka va re! Adino daholo ny fidongiana sy ny adi-varotra sy ny ota mamoa fady rehetra natao nandritra izay efa-taona izay ! Maninona moa no tsy manazava ny tena marina momban’ny tsy afahany mody eto an-tanindrazana e ?
Aleho averina eto, amin’ny teny Malagasy ny tena antony.
TSY AVELAN’NY FITSARANA AO AFRIKA ATSIMO MIALA AO IZY SATRIA VOARAY NY FITORIANA MAHAKASIKA NY VON’OLONA TEO ANOLOAN’NY LAPAN’AMBOHITSOROHITRA, NY 7 FEBROARY 2009. Ilain’ny fitsarana any izy ka notazomina ny pasipaorony.
Ny atao hoe "Cases dismissed" dia fangatahana tsy noraisina, tsy neken'ny fitsarana
Nampakatra io fanapahan-kevitra io izy, fa tsy nahazo rariny. Nivoaka ny didy tamin'ny 8 Febroary 2013, dia io izy mikatso ao Afrika atsimo hatramin’izao. Ny marina izany dia tsy ny fitondrana Tetezamita mihitsy no manakana azy. Ianareo ve dia mino fa raha tsy io didy avy any amin’ny fitsarana Afrikana tatsimo io tsy efa tonga teto izy ? Iza no nahalala ny andro sy ny fomba nandosirany teto ? Dia mbola i Andry Rajoelina ihany no lazaina fa tompon’andraitra amin’izany tsy fahafahany mody izany. Raha ny marina koa dia tokony tsy mahazo miteny mihitsy aloha izy raha tsy vita ny fanadiadiana azy any. Fa mahay fahagaga koa ilay Valo e !...
11 Desambra 2012. Ny Filoha Andry Rajoelina nitokana ny Coliseum
ATO NY SARY REHETRA
Raha miresaka an’i Boay kely dia tsotra: ay va re ka azo ampiasaina tsara ny foto-drafitr’asa nataon’”ilaikely tsy mahay n’inona n’inona” (hoy i Lalatiana Ravololomanana izay). Dia ny Coliseum ao Antsonjombe izany. Tsy nahavita n’inona n’inona tokoa i Andry Rajoelina ô ? Ay va re tsy gaboraraka ihany no nisy fa io misy fotodrafir’asa goavana nitsangana tao anatina fotoana fohy dia fohy sy tetezamita eo anelanelan’ny repoblika faha-III sy faha-IV. Ary santionany iray fotsiny io.
Manaraka: n’iza n’iza koa ny kandida ho tonga ao amin’io Coliseum io dia tsy maintsy ho feno foana fa dia mampahatsiahy ny propagandy tamin’i Hery Rafalimanana ity ataon’i Dada ity. Satria nilaza tokoa izy fa hampiasa ny fomba rehetra anohanana an’ity kandida faha-33 ity: vola, fitaovana sns. avy amina mpiombon’antoka vahiny.
Ireo olona tena nanorina ny AVANA (Antoko ny Vahoaka Aloha No Andrianina). Dia tena nanaraka an'i Jean Louis Robinson lasa sary bakolin'ny Ravalomanana daholo ve izy rehetra ?
Tsara izany. Dia niresaka fandrosoana ihany koa izy. Dia mitombo ny lainga satria raha gaboraka izany no nisy dia fanarenana aloha no tsy maintsy atao. Sa hampandroso ny gaboraka ventiventesiny lava io ? Dia izao hono e: Jean Louis Robinson ihany no afaka hampandroso ity firenena ity sy ny olona ao aminy. Tsy ho lava resaka aho fa izao ny afatro: raha te-androra mitsilany tanteraka ianao manana zo hifidy io dia fidio io kandida faha-33 io dia aza mimenomenona avy eo. Lainga no nidiran’i Ravalomanana teo amin’ny sehatry ny politika ary lainga ihany no hamaranany ny fiainany eto an-tany. Mino fotsiny ihany, amin’izany tranga ho avy izany, na dia mahay manodina resaka lava izao. Satria misy fetrany daholo ny zava-drehetra eto an-any.
Jeannot Ramambazafy sy Jacob Zuma mivady, tao New York, ny 26 Septambra 2012;
26 Septambra 2012 tao New York. Raha mbola misy kely finoana koa amin'izany tsy fahafahan'i Marc Ravalomanana miala ao Afrika atsimo ao dia nanazava tamiko ny Filoha Jacob Zuma (io ambony io ny sary porofon'izany fihaonanay izany) fa ny governemantany dia tsy miditra amina raharahan'ny Fitsarana, araky ny fizaran'ny fahefana na "séparation des pouvoirs" amin'ny teny frantsay.
Jeannot Ramambazafy – 14 Oktobra 2013
← Madagasikara fifidianana... Hery Vaovao N°3, 25 Septambra... →